लिफ्ट मागेर हिँडेकी यी नर्सकाे जीवनमा पत्याउनै मुस्किल पर्ने घटना – Khabaarpati
लिफ्ट मागेर हिँडेकी यी नर्सकाे जीवनमा पत्याउनै मुस्किल पर्ने घटना
December 16, 2020 December 16, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on लिफ्ट मागेर हिँडेकी यी नर्सकाे जीवनमा पत्याउनै मुस्किल पर्ने घटना
मलाई बिहानै ८/९ बजे नै नेपालगन्ज पुग्नु थियो, बिहानै साढे ५ बजे तिर हतारमा उठियो। मम्मीलाई नि उठाएर आफ्नो लागि खाजा बनाउन लगाए किनकी कोरोनाको समय छ, सबै ठाउँमा खाना नास्ता खाने जस्तो माहोल छैन।फ्रेस भएँ। मम्मीले पकाउनु भएको नास्ता खाएँ, झोला तयार पारे। यति गरुन्जेल ६ बजिसकेको थियो। मम्मीलाई हतारमा ल अब हिडेँ भनेर बाइक निकालेँ। एउटा काँधमा झोला भिरेँ, बाइक स्टार्ट गरेँ। *****सुदुर समाज ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’, ***घरको गेटबाट बाहिर निस्किएँ।घरबाट हिडेको लगभग खल्तिमा राखेको मोबाइलमा अलार्म बज्यो। सधैँ जसो म साढे ६ मा उठ्ने गर्थेँ तर आज म बाटोमा पुगिसकेको थिएँ। ,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
एकछिन रोकेर अलार्म बन्द गरेँ, अगाडि बढेँ। अत्तरियादेखि अलि अगाडि स्याउले बजार भन्ने ठाउँ छ, एक जना भरत शाह दाइ बिहानै साइक्लिङ गर्दै थिए। दाइ नमस्ते भन्दै बाइक अलि स्लो गरेँ। दाइले भन्नु भयो ‘ओहो भाइ! तिम्रो उठ्ने समय भैसक्या हो?’हाँस्दै भनेँ ‘परिस्थिति दाइ, समय समयको खेल, कहिले ७/८ बजेसम्म सुतिन्छ, कहिले ५ बजे हिडिन्छ।’ छर्लङ्ग उज्यालो भैसकेको थियो। मलाई नेपालगन्ज पुग्नु थियो समयमै। दाइ म लागेँ है, ढिला हुन्छ भनेर अगाडि बढेँ। खुटियाको पुलमा पनि मर्निङ वाक गर्नेहरु हिँडिरहेका थिए। बिहानको चिसो मौसम, सरर हावा खादै म नि अगाडि बढ्दै गएँ। बनबेहडा, कुचैनी राजिपुर हुँदै मसुरिया पुगेँ।गाडीहरु नि खासै चलेका थिएनन्, रोड खाली नै थियो। मैले धान्न सक्ने स्पिडमा बाइक चलाउन कुनै कुराले अबरोध गर्ने जस्तो अवस्था थिएन। मसुरियाको थोरै अगाडि एक जना युवतीले हात दिएर बाइक रोक्ने इशारा गरिन्। म दोधारमा परेँ, बाइक रोक्ने की नरोक्ने भनेर। जब नजिक पुगेँ, मेरो हात र खुट्टाको दुइटै ब्रेक एकै पटक लागेको थाहा नै भएन।
एक सुन्दर युवतीमा कतिसम्म आकर्षण हुन्छ भन्ने कुरा त्यो बेला बुझेँ जब मैले नचाहँदा नचाहँदै मेरो बाइकको ब्रेक आफै लागेको थियो।गुलाशी ओठ, खैरो आँखा, ५.४ फिट जति हाइट, सिल्की कपाल, हेर्दै आकर्षक जीउडाल। धेरैमा ५ सेकेन्ड भित्र मैले सबै यी कुरा हेरेर भ्याइसकेको थिएँ। अनि मुसुक्क हाँस्दै सोधेँ ‘हजुर भन्नुस्।’उनले उत्तर फर्काइन्, ‘कतासम्म जानु हुन्छ, मलाई लग्दिनु हुन्छ?’ आफूलाई त के खोज्छस् काना आँखा भने जस्तै भयो। मेरो बाइकले नि अँ हुन्छ भने जस्तै लाग्यो। एक सिट खाली छ लग्दिउँ न भने जस्तै लाग्यो। बोक्ने त बाइक हो, बाइकले नै हुन्छ भनेपछि मेरो के लाग्यो र! हुन्छ भनेँ मैले नि, आवाज निकाल्दै। उनले फेरि सोधिन् ‘कति टाढासम्म?’ भनेर।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
मैले नेपालगन्ज भनेँ, उनले खुसी हुँदै भनिन् ‘ए हो र?’ ‘तपाई कहाँसम्म जाने?’उनले उत्तर फर्काइन् ‘तपाईं जहाँसम्म लग्दिनु हुन्छ, त्यहीसम्म। तर जाने त म नि नेपालगन्जसम्मै हो।’ए हो र? ल बस्नुस्, म नि त्यहीसम्म जाने हो।’उनले फेरि सोधिन्, ‘कसरी बसौँ?’‘तपाईलाई जसरी सजिलो हुन्छ, त्यसरी नै बस्नुस्।’अनि अगाडि बढेउँ हामी। अब बाइकको रफ्तार पहिले जस्तो रहेन, स्पिड चलाउँदा उनको कपाल उडेर बिग्रिन्छ की भनेर विस्तारै चलाउदै थिएँ। कुरा गरे नि मज्जाले सुनिन्छ भन्ने तरिकाले चलाउँदै थिएँ। आफूले केही सोध्न सकिनँ, उनले केही सोधुन् भन्ने चाहाना थियपहलवानपुर पुगिसक्यौँ, केही सोधिनन्।अगाडि बढेउँ त्यताबाट नि। बाटो त्यस्तै त हो, खाडलहरु आए ब्रेक लगाउनु पर्यो बाइक। अझैँ स्लो भयो, उन्ले अनि बोल्न सुरु गरिन् ‘यो देशको बाटो कहिलै राम्रो नहुने भयो है सर’ भनेर।‘अँ सधैँ यस्तै हो, कहिलै राम्रो देखिएन’ भनेँ मैले नि। मैले नि अब मौका पाएँ कुरा सुरु गर्न। सोधिहालेँ ‘के गर्नु हुन्छ’ भनेर।
अब चिसापानी पुगेपछि त फेस टु फेस कुरा हुन्छ। फेरि सोचेँ, यति राम्री अनि आफैदेखि आफैलाई प्रश्न गरेँ, उनले त केबल लिफ्ट मागेकी हुन्, फेरि यो सबै कुरा मलाई किन चाहियो! नेपालगन्ज पुगेपछि उनी आफ्नो बाटो, म आफ्नो बाटो, किन सबै सोध्नु पर्यो! ह्या केही सोध्दिनँ अब भनेर म ढुक्क भाको थिएँ।‘अनि गाँजल र कपाल त उडिसकेछ त,’ मैले हाँस्दै भनेँ। उन्ले हाँस्दै रुक्नुस्, म मुख धोएर आउछु भनिन्। मुख धोएर आइन् अनि मौकामा उनले हाँस्दै भनिन् ‘नहँसाउनुस् न, सिधा सोध्नुस् न। मेरो बोइफ्रेन्ड छैन, ढुक्क भए हुन्छ।’‘बोइफ्रेन्ड तपाईको छैन, म कसरी ढुक्क हुने,’ मैले भनेँ। अनि उनले फेरि भनिन् ‘भयो, तपाई जति सकिन्न।’मैले भनिहालेँ, ‘फेरि बोलेर त म जति कोही सक्दैन, बोलेर मसँग जित्ने केटी खोज्दैछु।’उनले फेरि हाँस्दै भनिन्, ‘सक्न त म सक्थेँ तर अहिले ट्राइ गर्न मन छैन।’,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
यी महिला जो घोडा जसरी दौडिन्छिन् (भिडियोसहित)